Ejikọtara Netflix na Foto Google n'ime Google Home | Akụkọ akụrụngwa
Homelọ Google abanyelarị Netflix na Foto Google
Agobọchị gara aga Google gbara ndị mmepe nke atọ ume ịzụlite «Omume» ka iwekota ha na Homelọ Google. N'ụzọ dị otu a, enwere ike iji ụfọdụ njirimara nke ngwa na ọrụ ndị ọzọ site na nkasi obi nke iwu olu. Nke a bụ ebe Google ga - esi wepu onwe ya ọtụtụ asọmpi n'ihi oke mkpa ọ ga - abụ usoro mmeghe.
Ọ bụ na ihe omume na October 4 mgbe Google gosipụtara Netflix mwekota na Homelọ Google. Atụmatụ ahụ ga-ekwe ka ndị ọrụ kpọọ ọdịnaya na Chromecast, ma ọ bụ ngwaọrụ ndị dakọtara na Chromecast, na obere iwu olu ole na ole. Ihe omuma a echere ogologo oge ka enyere ndi oru aka dika mejuputa Google Photos.
Na ntọala Onye enyemaka na ngwa Google Home Nwere ike ịchọta ngalaba «Vidiyo na Foto», nke gụnyere nhọrọ iji jikọta akaụntụ Netflix ma mee ka ọ rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị njikọta nke Foto. Ihe ọhụrụ a na-arụ ọrụ maka ụfọdụ ndị ọrụ wee banye na ntinye nke Google na-arụkarị na mpaghara, ọ bụ ezie na n'akụkụ ndị a, anyị ka ga-echere ịnweta onye enyemaka olu Google Home maka ụlọ dị maka ịzụta.
Nsonaazụ nke njikọta nke foto Google na Netflix na Google Home pụtara na site na nkasi obi nke ime ụlọ gị, ịnwere ike iji otu n'ime iwu iwu ndị a: «Hey Google, gosi m foto Pedro na TV"Ma ọ bụ" Hey Google, gosi m foto sitere na December 10, 2016 na Google Photos na TV. " Ozugbo ahụ, ịnwere ike ịnwe foto ndị ahụ niile ma ọ bụ kpọọ ọdịnaya Netflix na-ejikọtaghị aka na ngwaọrụ ahụ, naanị site na mma iji iwu olu.
A-atọ ụtọ nke ukwuu maka ndị nwere Homelọ Google n'ụlọ na ha ga-enwe ike ijikọ akaụntụ Netflix na Foto ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Homelọ Google abanyelarị Netflix na Foto Google
Hichapụ Airpods n'akwụkwọ ozi ahụ na ndị Magi n'ihi na ha agaghị adị ruo mgbe Krismas gachara
Echiche nke Samsung S8 ga-adị